FANDAHARANA FOTOAM-BITA : Mitohy hatrany ny fialana bala ataon’ny Filoham-pirenena
Efa miharihary ary tsy takona afenina intsony ny tsy fahombiazam-pitantanan’ny fitondram-panjakana ankehitriny izay tarihan’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina. 5 décembre 2017
Na ny fiarahamonim-pirenena, ny antoko politika isan-tokony hatramin’ireo ray aman-drenim-piangonana aza dia samy miaiky fa latsaka an-katerena tanteraka ny firenena ary miaina anaty fahantrana mangitsokitsoka ny vahoaka.
Mandritra ny tafa mivantana ataon’ny Filoham-pirenena ao anatin’ilay fandaharana fotoam-bita mivoaka isaky ny faran’ny herinandro anefa dia toa misora-tena toa voatango ary miezaka manadio ny tenany hatrany fa tena nahavita nampandroso an’i Madagasikara tokoa kanefa tsy hitany izao lavaky ny fahantrana nilatsahan’ny vahoaka izao ary efa tsy mahita ny lalan-kivoahana intsony ny ankamaroany.
Nambarany tao anatin’ilay fotoam-bita indray fa voaporofo amin’ny alalan’io fandaharana io ny fahalalahana miteny sy maneho hevitra eto Madagasikara. Ny zava-misy marina iainana anefa raha fanehoan-kevitra tsy mifanaraka amin’ny an’ny mpitondra dia misy hatrany ny tery sy ny sakatsankana. Nahay niala bala hatrany ny Filoham-pirenena eo anatrehan’izany izay nilazany fa tsy maintsy misy ny fepetra raisina ho an’ireo izay manao fihantsiana sy manakorontana ny filaminana. Ankoatr’izay dia nambaran’ny filoha tao anatin’ny fandaharana fa tena misy ny asa ataon’izy ireo ary mbola ho avy ny andro ahitan’ny Malagasy ny anjara masoandrony.
“Tena misy asa atao na ekeko aza fa mbola tsy ampy saingy mbola ho avy ny ahitan’ny Malagasy rehetra tsy ankanavaka ny anjara masoandrony”, hoy ny ampahany tamin’ireo voalazan’ny Filoham-pirenena. Mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao ihany hoe raoviana vao hahita ny fampandrosoana mivaingana ny vahoaka, kanefa amin’izao fotoana no tena ilan’izy ireo ny fandraisan’andraikitry ny fanjakana.
Eo anatrehan’ny kiana mafy mahazo ny Filoham- pirenena mahakasika ny delestazy izay nampanantenainy fa ho foana ao anatin’ny telo volana monja dia nahay niala bala hatrany ny tenany. Nolazainy fa azo atao tsara ny mampirehitra foana ny jiro saingy fatiantoka mihoa-pampana no azon’ny orinasa Jirama noho ny fahanteran’ny fotodrafitrasa sy tsy fahampian’ny solika. Ity farany indray araka izany no ianjeran’ny rihitra rehefa tsy mahatanteraka ny toky nampanan- tenainy ny vahoaka ny mpitondra.